Isinyibilikisi esinyibilikayo, esiyilelwe njengeziko lokungenisa iziko, Unayo a Umthamo opheleleyo wama-50 t kwaye iluncedo
galela-off ubunzima be-40 t ubuninzi. Amandla anyibilikayo aveliswa ngabangenisi abane at ii-angles ezichaziweyo
umgangatho weziko kunye a Umthwalo opheleleyo oxhunyiwe we-3,400 kW. I-inductor nganye inesiguquli sayo esicociweyo kulawulo lomntu ngamnye.
In le isiganeko ukusilela kwe-inductor enye, abanye babambe isithende esishushu at ubushushu ngelixa i-inductor ephosakeleyo ikho
kufakwa enye endaweni yayo. Iziko liphinde likulungele ukusebenza kwemveliso emva koko a ixesha le 12 iiyure. Isinyithi esityhidiweyo
wagalela phandle ngokusebenzisa isithando somlilo kwaye ungadluliselwa at zero ithambeka ukuba isithando somlilo at le Izinga of 4 t/h. Ukubanjwa-kwaye-bephosa iziko ikwamkela ukunyibilika kwiziko. Oku kwenza isinyithi ukuba ibuyiselwe ukuba iziko elinyibilikayo xa kufuneka njalo at zero ithambeka.
Inductor Service Life kunye Ukutshintshwa ixesha
The Inkonzo yobomi be inductor kuxhomekeke kumthamo ofakiweyo, le Uhlobo inkqubo yokupholisa, imilo yejelo, kunye nohlobo lining yodongwe. Inkonzo Ubomi beentsuku ezingama-250 buchazwa ngumoya-zipholile ba khuthazi zilinganiswe at 250 kW, kodwa kuphela 100 iintsuku zokulinganiswa kwe-400 kW. In zombini amacala, isinyithi esenziwe malunga ne-1,600 t ialuminiyam.4
Ngokuphucula ukupholisa isiphumo kunye nohlobo lwelining yodongwe, kunokwenzeka ngama-400-kW inductors ukuba fi kelele izinto zobomi ze
Iintsuku ezingama-250 kunye ngaphezulu nge izixhobo zentsimbi ze-2,500 t/inductor. kunjalo, ubomi benkonzo ye kuphela 100 iintsuku nazo ayaziwa. Esinye isityalo esisebenzayo Iingxelo ubomi inkonzo izinto of 15-27 iinyanga.
Phezulu inductor amanqaku angama-900 kW kwaye ngaphezulu neproiirhafu zedonction of 30 t/ ngosuku inductor, kunyanzelekile ukuba kuqondiswe
ukuhamba kwe- metal kunye nokupholisa ngamandla, baye hayi isasebenza nanini na ubude bexesha. Amava okuqala abonisiwe ukuba ukuhamba ngamandla oonobangela Ukhukuliseko lomhlaba kwi nkqo imigudu.
nokuba nangona kunjalo hayi kuyimfuneko ukuba ucoce amajelo, i enqwenelekayo inkonzo ubomi be inductor bekunjalo ncitshiswa. UboyaUphuculo lwentsebenzo lwenziwe ngokucotha isalathiso flow kunye ngokubonelela a izinzile ngakumbi amanzi ukupholisa
inkqubo, ethi kunika ithemba kuba ukufumana ubomi benkonzo izinto of 12 iinyanga Abaphezulu-abaxhasi bamandla.
Izinto ezilahliweyo zeAluminiyam zinokuqwalaselwa kwiiyunithi ezahlukeneyo zokunyibilika:
• ngqo-amaziko ashushu (irhasi okanye ioyile-zixothwe) ngezixhobo zokubuyisela ubushushu
• i-induction melting amaziko, ijelo okanye uhlobo olubethelelweyo.
Ukhetho lweyunithi luxhomekeke ikakhulu kubukho kunye nohlobo lwamandla kunye nemveliso iindleko.
Ukubonelelwa ngoku kwamafutha kufuna thina ukuba re-ukuvavanya ukufumaneka kwayo kwixesha elizayo. It is ukuba kulindeleke ukuba Ukunyuka kwamaxabiso epetroli kuya kubandakanya an ukwanda kwexabiso lamandla okubambela- umbane- apho ke ucinga kumele be banikwa
ngaphezu kwayo yonke enye into ukuba ukusetyenziswa ngokupheleleyo kwaloo ndlela yamandla athabatha indawo. Apha, iziko lokungeniswa linikezela a
phezulu-Ukusetyenziswa kwegalelo lamandla, kuba ubushushu benziwa kukufakwa kombane ngqo kwindawo yokuhlambela.
Ukunyuka kwabasebenzi indleko kumazwe ahambele phambili kwaye amaxabiso aphezulu esinyithi ayasinyanzela ukuba remelt nokuba iphantsi-grade, ukukhanya-gauge ezilahliweyo kunye ukuba baqeshe a iyunithi yokunyibilika apho izinto zibalulekileyo ukuba misela ukuqhubekeka indleko ziphantsi, oko kukuthi amandla indlekoUkunyibilika kwelahleko, yesondlo indleko, kunye nokusebenza iindleko.
iindidi Teknoloji tags i-aluminium, i-aluminium iyanyibilika, i-aluminium, i-aluminium ixabiso le-oven, i-aluminium, i-aluminium yomlilo, thenga isinyithi sealuminium, i-aluminium yobunini, ukutyungulwa kwe-aluminium, Ukuchithwa kwe-oven, Uqheliso lokunyibilikisa iziko lealuminiyam, ukunyibilika kwe-aluminium Post yokukhangela